डचटाउन • डचटाउनस्टा.लि..org मा संगठित संसाधनहरू रोक्न प्लग इन
संगठित संसाधनहरूलाई रोक्नुहोस्
हाम्रो प्रचार को प्रचार को एक हिस्सा को रूप मा डचटाउनमा ब्लाक आयोजन, हामीले तपाईं र तपाईंको छिमेकीहरूका लागि निर्माण ब्लकको रूपमा प्रयोग गर्न संसाधनहरू संकलन गरेका छौं।
DT2 को साथ स्वयमसेवकहरु को घटनाहरु को साथ मद्दत डचटाउन चलचित्र रातहरू, कोष सers्कलनकर्ता, व्यापार खुशी समय, र अधिक। मा DT2 को मिशन को बारे मा जान्नुहोस् dutchtownstl.org/dt2.
स्वयंसेवकहरूले अर्बनमेनसँग कार्य गर्दछ डचटाउन ग्रोथ म्यानेजरलाई प्रशासनिक सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन सहयोगका लागि मिसौरी मुख्य सडक जडानको4+ १ पोइन्ट दृष्टिकोण:
अधिक जान्नुहोस् dutchtownstl.org/urbanmain.
डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला
डचटाउन सीआईडी ​​डचटाउनको मुख्य कोरिडोर (दक्षिण ग्रान्ड, मेरामेक, र भर्जिनिया) को अंश कभर गर्ने एक विशेष कर जिल्ला हो। जहाँ कर डलर जिल्लामा खर्च गर्नुपर्दछ, सीआईडीको मिसनको एक अंश हो यो बस्तीमा पूरै सुधार गर्नु हो। CID मा के हुँदैछ हेर्नुहोस् dutchtownstl.org/cid.
डचटाउन जस्टिस एलायन्स
डचटाउन जस्टिस एलायन्सले मतदाता शिक्षा, उम्मेद्वार र मुद्दा शिक्षा, र इक्विटी कार्यहरू लगायत नागरिक गतिविधिबाट डचटाउनमा इक्विटी ल्याउने कुरामा केन्द्रित छ। फेसबुकमा डचटाउन जस्टिस एलायन्सको पालना गर्नुहोस्.
DutchtownSTL सामग्री र संग्रह प्रकाशित गर्दछ स्रोतहरू र अन्य जानकारी र डचटाउन STL.org, सामाजिक मिडिया च्यानलहरू, र अन्य स्थानहरू मार्फत सेयरहरू।
डचटाउन कमिटीहरूले डचटाउनमा सीधा समुदाय इनपुट र गतिविधिहरू। समितिहरूले डिजाइन, आर्थिक जीवन, पदोन्नती, संगठन, र सुरक्षित सफा र हरियो शामिल गर्दछ। अधिक खोज्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
सामुदायिक सशक्तिकरण, आवास स्थिरीकरण, र जिम्मेवार घर जग्गा विकासको माध्यमबाट डचटाउनमा डीएससीसीले छिमेकी जीवनशक्तिलाई बढावा दिन्छ। भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउनसाउथ थप जान्न।
डचटाउन म्युचुअल सहायता
भाग STL म्युचुअल सहायता, आयोजकहरूको एक नेटवर्क, चale्गाइ गर्नेहरू, कलाकारहरू, समुदाय नेताहरू, र हरेक दिन मानिसहरू एक साथ आउँदछ मानिसहरूलाई उनीहरूको छिमेकीहरूलाई सम्पर्क गर्न।
अन्य संगठनहरू र सेवाहरू
अर्बन लिग महासंघ ब्लक एकाइहरु
यो ब्लक एकाइहरूको संघ सेन्ट लुइस समुदायका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको वरपर सुधार गर्न मद्दत गर्न समर्पित छ। १ 1932 XNUMX२ देखि शहरी लिगको सहयोगी, फेडरेशन सेन्ट लुइस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो स्वयं सहायता ग्रासरुट संगठन हो।
यो सामुदायिक संगठनहरूको सेन्ट लुइस संघ सेन्ट लुइसभरि बिभिन्न छिमेकी संघहरूको गठबन्धन हो, जसले उनीहरूको सदस्य संगठनहरूलाई समर्थन र समुदाय-आधारित कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ।
यो CSB अधिकांश शहर सेवाहरूको साथ मुद्दाहरू प्रबन्ध गर्न सेन्ट लुइसको क्लियरिhouseहाउस हो। हाम्रो पढ्नुहोस् नागरिकको सेवा ब्यूरो को लागी मार्गदर्शन.
ब्राइटसाइड सेन्ट लुइस
राम्रो पक्ष हाम्रो क्षेत्र सफा, हरियाली, र अधिक पर्यावरण दिगो बनाउनको लागि सेन्ट लुइसको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने, संलग्न गराउने र छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्ने हो। तपाईंको आयोजन गर्न ब्राइटसाइडसँग काम गर्नुहोस् छिमेक सफा.
हाम्रो नागरिकको सेवा ब्यूरो को लागी मार्गदर्शन रद्दीटोकरी, सडकहरू, समस्या गुणहरू, र अधिकको साथ कसरी मुद्दाहरू रिपोर्ट गर्ने भनेर सिकाउँछ। सिक्नुहोस् कि कसरी अनलाइन वा फोनमा CSB रिपोर्ट फाइल गर्ने।
हाम्रोमा अपराध र अन्य मुद्दाहरूको रिपोर्ट कसरी गर्ने सिक्नुहोस् डोऱ्याउन पुलिसलाई सम्पर्क गर्ने विधिहरूको बारेमा छलफल गर्दै र केहि परिस्थितिमा उपलब्ध विकल्पहरूको अन्वेषण गर्न।
हाम्रो छिमेकी सुधार विशेषज्ञको भूमिका, नागरिक र शहर सेवाहरू बीचको सम्पर्कको बारेमा जान्नुहोस्। NIS मा गहन मार्गदर्शन.
व्यवसायका लागि संसाधन
DutchtownSTL नयाँ र स्थापित डचटाउन व्यवसायहरू सफल बनाउन मद्दत गर्न संसाधनहरू स collecting्कलन गर्दै र गाईडहरू सिर्जना गर्दैछ। भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय हामी कसरी मद्दत गर्न सक्छौं भनेर हेर्नको लागि।
सम्पर्क जानकारीको लागि एक स्टप शप। निर्वाचित अधिकारीहरू, उपयोगिता कम्पनीहरू, आपतकालीन सेवाहरू, र अधिक सम्पर्क गर्नुहोस्। बुकमार्क dutchtownstl.org/resources एक उपयोगी सन्दर्भ गाइड को लागी।
डचटाउन STL.org तपाईंको ब्लक व्यवस्थित गर्नुहोस्! संगठित संसाधनहरूलाई रोक्नुहोस्